Tartan isboorti oo lagu xusayay munaasabada 1-da Luulyo oo lagu qabtay Nairobi (Sawiro) – SBC
Tartan isboorti oo lagu xusayay munaasabada 1-da Luulyo oo lagu qabtay Nairobi (Sawiro)
Tartan kubada cagta ah oo lagu weyneynayay 1-da lulyo oo ay si heer sare ah u soo qaban qaabisay SYAO ayaa manta waxaa lagu soo gaba gabeeyay garoonka kubada cagta ee pumwani magalada Nairobi ee dalka Kenya.
Tartankan isboorti ayaa waxaa ka qeyb galayay intii uu socday 18 koox oo ku kala ciyaarayay jaaliyadaha Kenya ku sugan.
Aqoonyahano, Siyaasiyiin, qubaro isboorti iyo dhallinyaro oo ay kamid ahaayeen Muxudin Xasan Afrax, Macalinka macalimiinta Baskuwale, shine akhyaar, Macalin Jabshe, C/xakiin iyo Anas Cali oo ah qabiir isboorti, Ururo dhallinyarao iyo madaxda kooxihii ka qeyb galayay tartanka ayaa ka soo qeyb galay tartanka lagu xusayay 1-da lulyo.
Ciyaartii kama dambeysta eheyd ee la ciyaaray manta ayaa waxa ay eheyd tii ugu xiisaha badned waxaana isugu soo baxay kooxaha Islii Stars iyo Shaab, iyadoo ay u soo daawasho tageen boqolaal ruux oo ay xamaasad balaaran ka muuqatay.
Kulankan kama dambeysta ahaa oo ay labada koox ismari waayeen aya waxa dambeyntii guusha raacday kooxdii ku cayaareysay islii stars kuwaasi oo kubadiyay rigoorooyin ladhigay.
Qabiir isboorti macalinka macalimiinta macalin Butkuwala oo isagu furay ciyaarta ayaa ku booriyay dhalinyarada ciyaar wanaag iyo isjeclaansho dhamaan dhaliyaradii kasoo qeyb gashay.
Muxudin Xasan gudomiyaha ururada bulshada rayidka oo isna hadlo kooban ka jeediyay goobta ayaa dhalinyaradii ka qeyb galayay tartanka ugu baaqay in ay isboortiga iyo ladagaalanka cadowga ay isku wadaan oo aysan ku ekaan kaliyah isboortiga.
Max’ed Ibrahin Cali gudomiyaha hey’da SYAO oo isna goobta ka hadlay ayaa uga mahadceliyaay dhamaan ka qeyb galayaash, isagoo ku bogaadiyay dhalinyarad in ay mar waliba ku mashquulaan sidii ay dalkooda nabad inta ay ku soo dabaalaan ugu ciyaarilahaayeen tartamo noocaan oo kale ah.
Shiine akhyaar gudomiyaha waayaha cusub ayaa isna dhankiisa dhalinyarada ugu hambalyeeya islamarkaasin ku booriyay in ay ka libin keenaan oo aysan goobta uga tagin.
Ciyaarta ayaa waxa ay ku idlaatay jawi aad u sareeyay iyadoo ay goobta koobkii xuruxda badnaa kala hoyden islii stars, sidoo kale waxaa lagudoonsiiyay kooxihii kaalimaha galay hadiyado qaali ahaa oo ay kujireen qalab isboorti iyo lacag.